AWS - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Mobile, Falanqaynta
Adeegyada Shabakadda Amazon (AWS) waxay siisaa adeegyo kaabayaasha IT-ga ganacsiyada adeegyada webka. AWS waxay bixisaa kalsooni iyo isugeyn muhiim u ah sii wadida fulinta ganacsiga, taasoo dhalisay karti iyo koror ganacsi.
Waa maxay sababta loo raaco AWS?
AWS waxay siisaa faa iidooyin badan ururada helitaanka dejinta iyo bilaabida fulinta si dhakhso leh. Tani waxay si gaar ah faa'iido ugu leedahay bilowga raadinta maalgashiyo qiimo jaban oo loogu talagalay dejinta serverka iyo sidoo kale shirkadaha doonaya inay u wareejiyaan adeegeyaashooda daruurta. Faa'iidooyinka AWS waxay ka badan tahay qaabeynta server-ka jirka waa
kharashka ku ool ah
Furan oo Is rogrogmi kara
Agile iyo Elastic Instant
Waxaan u adeegsannaa isku darka dhowr adeeg oo AWS ah si aan ula kulanno shuruudaha xalka daruurtaada
Falanqaynta Mobilada ee AWS
AWS: Adeega Madal Madow oo dhamaystiran
AWS waxay siisaa faa'iidooyin badan ururada sidii loo dejin lahaa oo loo bilaabi lahaa fulinta dhaqso. Tani waxay si gaar ah faa'iido ugu leedahay bilowga raadinta maalgashiyo jaban oo loogu talagalay dejinta server iyo sidoo kale shirkadaha doonaya inay u wareejiyaan server-kooda daruuraha.
Our Project Tilmaamaha
Waxaan u dhisnaa oo u hormarinnaa shaqada, noolaanshaha iyo isgaarsiinta. Waxaan qaadnaa mashaariic annagoo ku talo galnay inaan helno xalal caqli -gal ah, xalal cusub oo ku wajahan dhibaatooyinka, yar iyo weynba.
Eeg nooca aan ahayn AMP